हवाई भाडा बढ्यो, अब कति ? - Laganikhabar
हवाई भाडा बढ्यो, अब कति ?
शुक्रबार, ०७ फागुन २०७७, १६ : ४८ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौँ - हवाई इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई सेवा प्रदायकहरूले हवाई भाडा पनि बढाएका छन् । हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले हवाई इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडामा केही वृद्धि गरेको हाे ।
सङ्घमा आवद्ध वायु सेवा कम्पनीले फागुन ८ गतेदेखि नयाँ इन्धन मूल्य लागू गर्नेछन् । सो विषयमा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत प्राप्त भई आएकाले हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको सङ्घले जनाएको छ ।
नयाँ मूल्यअ नुसार साविकको प्रतिलिटर रु ६५ बाट वृद्धि भई ६७ कायम गरिएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य बढेअनुरुप सबैभन्दा लामो गन्तब्य अर्थात् काठमाडाैँ –धनगढीका लागि रु ९० बढेको छ । काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको गन्तब्यमा न्यूनतम रु १० वृद्धि गरिएको छ भने काठमाडौँबाट हुने पर्वतीय उडानमा रु ७० बढेको छ । – (रासस)
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुन: बढ्यो
टाटा मोटर्सकोे नयाँ फरएभर रेन्जका गाडीहरु अब नेपालमा
बेनेली मोटरसाइलको पाँच नयाँ मोडेल बजारमा
एमजीको स्टाइलिस एसयूभी ‘एचएस’ नेपालमा आउँदै, के-के छन् विशेषता ?